← काठमाण्डौमा ठाँउ ठाँउमा झडप, प्रहरीद्धारा हवाई फायर र एक दर्जन अश्रुग्याँस प्रहार , स्थीति नियन्त्रणमा
सरकार तत्काल ढल्दैन सुजाता →
माओवादी आमहडताल र्फिता, किन अचानक र्फिता भयो माओवादीको आमहडताल ? यस्तो छ र्फिता हुनुको रहस्य
काठमाण्डौ, वैशाख २४, राती ९.१५
प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको राजीनामा नआए सम्म कुनै पनि हालतमा आमहडताल र्फिता नलिने अडान राख्दै आएको माओवादीले आज साँझ अचानक आमहडताल र्फिता लिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ । हिजो देखि विभिन्न देशका राजदुतहरुले माओवादी तथा अन्य दलका नेताहरुलाई भोटी समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गरेका थिए । हिजो प्रचण्डले भारतीय राजदुतलाई भेटेका थिए भने आज अमेरीकी राजदुतलाई भेट गरेका थिए । त्यसै क्रममा अमेरीकी राजदूतले माओवादीलाई तत्काल आमहडताल र्फिता लिन आग्रह गरेका थिए ।
किन अचानक र्फिता भयो माओवादीको आमहडताल ? यस्तो छ र्फिता हुनुको रहस्य
माओवादीले अचानक आमहडताल र्फिता लिने निर्णय गरेको ४ घण्टा अघि मात्र राजधानीको कलंकीमा आयोजना गरिएको एउटा माओवादीको आमसभामा वोल्दै माओवादीका उपाध्यक्ष वावुराम भट्टराईले आमहडताललाई अझै तिव्र वनाएर लैजाने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेको थिए आज साँझ वस्ने स्थायीकमीटिको वैठकले माओवादी आन्दोलनको स्वरुप र्निमाण गर्ने छ ।
वैदेशीक हस्तक्षेपको विरोध गदै आएको माओवादीले जारीराखेको आमहडतालको क्रममा हिजो र आज माओवादीका अध्यक्ष लगायतका केन्द्रीय नेताहरुसंग विभिन्न देशका राजदुतहरुले भेटेका थिए । सोही क्रममा उनिहरुले माओवादीलाई आमहडताल र्फिता लिन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दवाव समेत दिएका थिए । हल्ला हल्लाकै विचमा विदेशी राजदुतहरुको भेटका विच माओवादीको जारी आमहडताल र्फिताको निर्णयलाई नेपाली राजनीति क्षेत्रमा चासोका साथ हेरीएको छ ।
One response to “माओवादी आमहडताल र्फिता, किन अचानक र्फिता भयो माओवादीको आमहडताल ? यस्तो छ र्फिता हुनुको रहस्य”
मे 7, 2010 at 7:08 अपराह्न
माओबादी को एस्तो लाचारीपन र बकम्फुसे आन्दोलन हरुले देश का सम्पूर्ण जनता को आँखा खोलि दिएको हुनु पर्दछ . सायद अब माओबादी येश घटना बाट चेत्यो होला र भबिस्य मा आम हड्ताल गर्नु अघि हजारौ पटक सोच्लान र येस्ता लाचार हरुका कुरा सुन्ने पित्थु हरु सहि बाटो मा हिड्ने प्रयाश गर्लान. इ देश का सत्रु हरुलाई सान्ति सम्झौता कार्यन्वयन नभएसम्म सत्ता त k सम्षद मा पनि लान हुन्न थियो. कुकुर लै घिउ नपचेको एस्लाई भन्दछन. अब फेरी निर्बाचन हुनु पर्छ अनि यी विदेश का कठपुतली बिदेशी नीति का पुछार माओबादी भन्ने जन्तु को जात्र गर्नु पर्छ. महान नेपाली जनता ले पक्कै यिनलाई सजाए दिन्छन. सबै समय को माग हो.